पूर्व राजपरिवारको नाममा देशभर कती सम्पत्ती ? अब स्वास्थ्य शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा मात्र लगाइने –
पूर्व राजपरिवारको नाममा देशभर कती सम्पत्ती ? अब स्वास्थ्य शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा मात्र लगाइने
पूर्व राजपरिवारको नामबाट नेपाल ट्रष्ट कार्यालयको नाममा आएको सम्पत्ति देशभर २१ हजार ५ सय ६२ रोपनी ४ आनाभन्दा धेरै रहेको नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत श्वेतपत्र जारी गर्दै ट्रष्टको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन । सम्पतीमध्ये सबैभन्दा बढी ४ हजार ४४२ रोपनी जग्गा काठमाडौं जिल्लामा मात्रै भेटिएको छ । त्यस्तै काठमाडौंका केही महँगा ठाउँको जग्गा बिभिन्न कम्पनीले लिजमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
दरबारमार्ग,लाजिम्पाट,कमलादी,कालिमाटी,ताहाचल,छाउनी जस्ता महँगा ठाउँका जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लिज र भाडामा मा दिइएका छन् । ट्रष्टको नाममा रहेको मध्ये काठमाडौका ६ स्थानमा लिजमा दिइएको पोखरेलले बताए । धनकुटादेखि सुर्खेतसम्म १२ वटा जिल्लामा रहेको ट्रष्टको सम्पत्ती पारदर्शी र कानुनको अधिनमा रहेर प्रचलनमा ल्याइने ट्रष्टका अध्यक्ष पोखरेलले बताए । ट्रष्टका नाममा ७८ करोड नेपाली रुपैयाँ, अमेरिकी डलर १ लाख ४८ हजार र बेलायती पाउन्ड ५० हजार चल सम्पत्ति रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
पोखरेलले ट्रष्टका सम्पत्ति अब स्वास्थ्य शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा लगाउने बताए । उनले केहि स्थानमा प्रचलित कानुनमा रही र ट्रष्टलाइ फाइदा हुने गरी लिज अवधि थप गरिएको दाबी गरेका थिए । उनले यसअघि जेजस्तो अवस्थामा लिजमा दिएपनि अव भने सरकारलाई फाइदा हुने अवस्था हेरेर लिजमा लगाउने जिकिर गरे।
उनले ट्रष्टले सही सूचना सम्प्रेष्ण गर्न नसक्दा भ्रम सिर्जना भएको दाबी गरेका थिए ।
« अछाममा जीप दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु १२ जना घाईत
आठदिन सम्म अनसन वसेका कृष्ण प्रसाद पौडेलले अनसन तोडे »
बुधवार थप २ हजार ३ सय ५१ जनामा… (14)